crypto အကြွေးကဒ်များကိုလာမယ့်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါသလား - Tele RELAY တစ်ခု
By Tele RELAY တစ်ခု On သြဂုတ်လ 22, 2019
ကုန်စည်များအတွက်ငွေပေးချေမှုနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ, မကြာခဏခရီးသွားများအတွက်နှင့်နယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သူတွေကို၏အဓိကပြဿနာများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအပန်းဖြေ၏ပြန်လာလျင်မြန်စွာသည့်အခါစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ် သင်သည်သင်၏ဘဏ်ကြေညာချက်ကိုတွေ့မြင်.
ဒါကြောင့် crypto debit ကဒ်ထဲသို့မဝင်မီဒါကြောင့်အချိန်သာကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ Crypto ပရိတ်သတ်များသည်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် crypto ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုထည့်သွင်းရန်စတင်နေကြသည်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေပေးငွေယူများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကုန်အကျသက်သာစွာဖြင့်စတင်ခံစားနေကြသည်။ ဒီတော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲ။ တချို့က crypto ခရီးအတွက်ခြေလှမ်းသစ်အဖြစ် crypto ခရက်ဒစ်ကဒ်ရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြခဲ့တယ်။
ပထမဆုံး crypto debit card ဆိုတာဘာလဲ။
crypto debit card သည်အချို့အတွက်အတော်အတန်သိသာထင်ရှားပုံရသည်။ သို့သော်ဖြေဆိုရန်လိုအပ်သည့်မေးခွန်းများလည်းရှိသည်။ သင်၏ပုံမှန်ဒက်ဘစ်ကဒ်ကဲ့သို့ပင်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်အတွက် crypto debit ကဒ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သမားရိုးကျဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုသင်၏ဘဏ်အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားစဉ်၊ crypto debit ကဒ်သည်သင်၏ crypto ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွင်လည်းအလွယ်တကူအပါအဝင်အများအပြားစစ်မှန်အော်ပရေတာများကဝယ်ယူနေကြသည် အလွန်ကောင်းသောအွန်လိုင်း Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ Luno,။ သို့သော်ကအကောင်းဆုံး crypto ဒက်ဘစ်ကဒ်အချို့ Trustees နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှစ်ဦးစလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပြန်ပြောပြရပါမည်။
Crypto Debit Card ကို MasterCard သို့မဟုတ် Visa Terminal များနှင့်အတူလက်ခံမည်ဖြစ်သော်လည်းသမားရိုးကျဒက်ဘစ်ကဒ်အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများ၊ ကုမ္ပဏီ၊ စတိုးဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်သင်ပြုလုပ်သောအခြားမည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆိုလက်ခံအတည်ပြုလိမ့်မည်။ ဝယ်ယူ cryptocurrency ကိုလက်ခံရပေမည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, တစ် ဦး တိုးပွားလာအရေအတွက် လူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများမှ Bitcoin ကိုလက်ခံ.
မှန်ကန်စွာလည်ပတ်နေသော crypto debit ကတ်များဥပမာများစွာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့ကြုံတွေ့ရသောအတားအဆီးများကိုမရပ်တန့်စေဘဲအချို့သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ခံနေရသည်။ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်အမျိုးသားဘဏ်များကပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောငွေပေးချေမှုစနစ်များသည်အလုပ်ကိုကိုင်တွယ်။ မရသောကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့သူများသည်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပြီးအချို့မှာလိမ်လည်မှုများဖြစ်သည်။
အလားအလာ crypto အကြွေးကဒ်များကိုအဘယ်မှာရှိသနည်း
crypto credit cards များသည်အောင်မြင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သော်လည်းအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းရှာရန်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် crypto ဒက်ဘစ်ကတ်များကဲ့သို့ပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်သည်ပိုင်ရှင်အားသူမရှိသေးသောငွေကြေးကိုလက်လှမ်းမီစေသည်၊ ထို့ကြောင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်လူတို့အား cryptocurrency ပေးရရန် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ထိုလူကိုမည်မျှသုံးစွဲခွင့်ပြုသည်ကိုမည်သူဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ သူတို့ပြန်မပေးရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ သင်စျေးကွက်တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုများအတွက်သင်မည်သို့အကောင့်ပြုပါသလဲ
အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းပြီးပြီပြီးတာနဲ့ - နှင့်ပိုပြီး - crypto အကြွေးကဒ်များကိုလာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်နိုင်!
Microsoft က AZ နှင့် AZ-70-535 မှမိုက်ကရိုဆော့ဖ 300-301 နှင့်ပြောရမည်မှာမင်္ဂလာပါမှနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆိုရမည်
Vpn Best သားမွေး Deutschland 2019